Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamanka Puntland oo saaka lagu dilay Garoowe | goboladaradio.com	Saturday, May 25th, 2013	Home
Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamanka Puntland oo saaka lagu dilay Garoowe
Published on August 6, 2012 by admin · No Comments Published on August 6, 2012 by Lucky (Gobolada Radio) Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka Maamul Goboleedka Puntland ayaa saaka lagu dilay Gudaha Magaalada Garoowe ee xarunta Maamulka Puntland.
Kooxo ku hubeysan aadalada bastoolada ayaa ayaa saaka magaalada Garoowe ku dilay xildhibaan Sheyba Sheekh Maxamuud oo ka tirsanaa golaha baarlamaanka ee maamulka Puntland xili uu ka soo baxay Masjid ku yaala agagaarka xaafadiisa.
Kooxaha dilka fuliyey oo wajiyadu u duubnaayeen ayaa Xildhibaanka toogtay xilli uu ka soo baxay masjid u dhow hoygiisa oo ku yaalla xaafadda 1-da August halkaas oo uu ku soo tukaday salaaddii subax, waxayna rasaasta ka haleeshay qoorta.
Waxayna kooxihii dilka fuliyey ay ka baxsadeen goobtii ay dilka ka geysteen iyadoona halkaasi ay gaareen ciidanka ammaanka ee Puntland oo baaritaanno xooggan ka wada, lamana oga sababta dilkiisa ka dambeysay.
Dhinaca kale, waxaa magaalada Garoowe iminka ka socda qaban-qaabada aaska marxuum Sheyba Sheekh Maxamuud, waxaana la baajiyay mooshin uu ka doodi lahaa baarlamaanka Puntland oo ku saabsan xeerka doorashooyinka ee dowladaha hoose.